Monday September 02, 2019 - 07:48:27 in Maqaallo by Wariye Tiriko
Buug buug sita oon waddankii ku soo arkay. Fasaxii Hargeisa tobban ayaamood ayuun baan ka soo sokeeyay maanta.
Waxaan soo arkay, laba innan oo isku qabiil ah, isla xaafad ah, isku iskuul hoose, dhexe iyo saraba ka baxay, isku da’a ah, isla jaamacad ka qalin yabiyay, waloow ay kala facolty ahaayeen, balse labadu ay arts barteen, mid uu haysto MA, halka uu midna ka haysto BA. Labada innan midkoodna shaqo kama uu helin dowlada iyo ganacsatada toona. Balse waa ta i soo jiidatee, midi wuu fakiray oo labaataneeye oroma ah ayaa u shaqeeya oo xashiishkuu guraa, laba rayiislena suuqa hoose ayuu ku samaystay, sideed waashmaana wuu kireeyaa, bishiina 1000 dollar ugu yaraan wuu ka helaa, shaqo la'aan daaye Maxamedow xashiishkii baan dhamayn laayahay oo maalin walba kaalayoo naga qaad iyadoo la i leeyahay ayaan ka rawaaxaa ee dalkeena nimcaa taal.